» म पनि राजनीति गर्दिन अरुलाई पनि गर्न दिन्नः सानु लामा
११ श्रावण २०७७, आईतवार १७:४८
कोरोना भाइरस कोभिड–१९ कारण मुलुकमा झण्डै चार महिनापछि लकडाउन खुलेको छ । लकडाउनका कारण सबै जसो क्षेत्रमा प्रभाव परेको छ । त्यस्तै खेलकुदको क्षेत्रमा पनि प्रभाव परेको छ । अन्य देशमा हेर्ने हो भने पनि केही खेलकुदहरु संचालन भएपनि धेरै जस्ते खेलहरु अझै संचानलमा आएका छैनन् । झन नेपालको अवस्था हेर्ने हो भने अझै कुनै पनि खेलकुदहरु संचालनमा आउन सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा मकवानपुरमा खेलकुद तथा युवाहरुको अवस्था, खेलकुदमा हुने राजनितिका कारण परेको असर र मकवानपुरलाई खेलकुदमा कसरी अगाडी बढाउने योजनामा केन्द्रित रहेर प्रहर खबर डटकमका लागि संजिब रसाईलीले मकवानपुर खेलकुद बिकास समितीका अध्यक्ष सानु लामासंग कुराकानीः
सर्ब प्रथम यहाँलाई मकवानपुर खेलकुद बिकास समितीको अध्यक्ष हुनु भएको बधाई छ । खेलकुद विकासमा यहाँको योगदान के के हुनुपर्छ ?
यहाँहरुलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद ।
खेलकुद भनेको सबैको ब्यक्तिहरुको धेरै महत्व राख्दछ । म आफै पनि खेलाडी भएकोले खेल क्षेत्र बिकासको लागि खेल संरचनाले पनि प्रभाव पर्छ । अधुरो रहेका खेलकुद संरचनाहरुलाई बिशेष ध्यान दिने, खेलकुद क्षेत्रमा २० औँ ३० औँ बर्षसम्म योगदान दिएका खेलाडीहरुको बारेमा पनि कुनै पनि कदम राज्यले चालेको देखिदैन त्यस्ता कुराहरुलाई बिषेश ध्यान दिएर हाम्रो टिमले काम गर्ने छ । म खेलकुद बिकास समितीमा आएर लकडाउनको कारण खासै काम गर्न पाएको छैन ।
लकडाउन पनि खुल्यो बिगतमा भएको कमि कमजेरीलाई हात्मसाथ गर्दै खेदकुदको बिकासमा लाग्ने छु । देशको राज्य संरचना परिवर्तन भएसंगै केही कुराहरुमा स्पष्ट नभएको कारण केही समस्यहरु देखिएको थियो । बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौंडामा निर्माण धिन अन्तराष्टिय स्तरको गौरीटार रगांशाला निमार्णमा लागि रहेको छु । खेलकुद बिकासको लागि खेल खेल्ने स्थानले धेरै महत्व राख्ने भएकोले मकवानपुरको हरेक स्थानिय तहका प्रत्येक वडा वडामा खेल मैदान र कवर्ड हल निमार्ण गर्ने हाम्रो लक्ष्य छ ।
खेल मानिसलाई किन आवश्यक छ ?
खेल ब्यक्तिको लागि मात्र नभई देशलाई चिनाउने मध्यम पनि हो । खेलले मानिसलाई भबिष्यमा अगाडी बढ्न धेरै महत्व राख्दछ । खेलमा समुही रुपमा अभ्यास गरिने भएकोले अनुशासन, धै¥यता, सहन सक्ने क्षमताको बिकास, मनोरञ्जन साथै स्वस्थ्यका लागि खेलकुद भएकोले खेलकुद मानिसको लागि धेरै आवश्यक रहेको छ ।
तपाई राजनीतिमा लाग्नु भएको ब्यक्ति खेलकुदमा असर पर्दैन ?
खेलकुद देशको चिनाउने मध्यम भएकोले म राजतीतिमा लागे पनि मैले खेललाई राजनीतिसंग जोडेर काम गर्दिन । यो सबै ब्यक्तिमा भर पर्ने कुरा हो । मैले खेलकुदलाई राजतीतिक तबरले हेरेको छैन । म राजनीतिमा मात्र लागेको छैन, ब्यवसायी, समाजसेवा तथा सामाजिक काम पनि लागि रहेको छु । समाजमा रहेका ब्यक्तिहरुलाई समस्या पर्दा सहयोग गरिरहेको छु । मेरो समाजसंग छुटै सम्बन्ध रहेकोले राजनीतिमा लागे पनि सबै कुरालाई मिलाएर लाने हो भने कुनै असर पर्छ जस्तो लाग्दैनन् ।
दुब्र्यसनमा फसेका युवाहरुलाई खेलकुदमा अग्रसर गराउनु के कसरी लागि पर्ने योजना बनाउनु भएको छ त ?
यो कुरा मकवानपुर मात्र नभई देशकै प्रमुख चुनौतीको रुपमा रहेको कुरा हो । चेतना, अशिक्षा, गरिबी लगायतका बिभिन्न अभावका कारणले युवाहरु कुलतमा फसेका छन् । चेतना स्तर बृद्धी गर्दै युवाहरुलाई खेलकुद मात्र नभई बिभिन्न क्रियाकलाप तथा उत्पादनशिल क्षेत्रमा केन्द्रित गराउनु राज्यका तीन ओटा निकायले गम्भिर भएर काम गनु पर्छ ।
खेलकुद क्षेत्रमा धेरै राजनीतिक बिवाद आउने गरेको छ, मकवानपुरमा पनि यसको बिवाद देखिन्छ खेलकुदमा किन धेरै राजतिनी हुन्छ ?
नेपालको खेलकुदमा राजनीति पहिले देखि नै रहेको छ । यो ब्यक्तिमा भर पर्ने भएको कसरी खेलकुद क्षेत्रको बिकास गर्ने हो भन्ने सोच्नु पर्छ जस्तो लाग्छ । पहिले र अहिलेको राज्य संरचना तुलना गर्ने हो भने पहिले भन्दा अहिले काम गर्न सरल भएको छ । मकवानपुरको हकमा चाहि राजतीतिक बिवाद देखिन्छ जस्तो लाग्दैन ।
युवा देशका कर्णधार भनिन्छ युवालाई पत्याउँदैनन् किन ?
युवालाई पत्याउँदैनन् भन्ने कुरा मलाई लाग्दैन । किनकी सबै युवाहरु एकै प्रकारका हुँदैनन् । समाजमा केही युवाहरु नराम्रा भयो भन्दैमा सबैलाई नराम्रो भन्न मिल्दैन । अहिलेको परिपेक्षमा हेर्ने हो भने युवाहरु धेरै पढेका, जनेका बुझेका र अनुभवी पनि रहेका छन् । त्यस्ता खालका युवाहरुलाई समेटेर नेतृत्व सुम्पिने हो भने विश्वासका साथ काम गर्ने छन् । कुनै प्रश्न चिन्ह् उठाउँनु पर्छ जस्तो लाग्दैन । समेटेर लान चाहि सक्नु पर्छ ।
लकडाउनका कारण खेल क्षेत्रहरु सबै ठप्प छन् । लकडाउन पनि खुल्यो, कोरोना अवस्था हेर्ने हो भने निर्मुल भइसकेको अवस्था छैन । अव मकवानपुरमा खेलकुद चलाएमान बनाउँनको लागि के छ भाबी योजनाहरु ?
लकडाउनले खेलकुद क्षेत्रमा धेरै नकारात्मक प्रभाव पारेको छ । खेलकुद क्षेत्र मनोरञ्जनसंग जोडिएको भएकोले मानिसहरुको ठुलो मास हुने गर्दछ । यो एउटा चुनौतीको पाटो पनी हो । त्यसैले कसरी खेलकुद संचालन गर्ने भन्ने बिषयमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको निर्देशन अनुसार जिल्लाको कोरोनाको कहरलाई मध्यनजर गर्दै छिटै खेलकुद संचालनको तयारीमा छौँ । यो बिषयमा छिटै निर्णय हुन्छ भन्ने बिश्वास लिएको छु ।
सबै खालका प्रतियोगिताहरु एकै साथ संचालन गर्न नसकिए पनि क्रमिक रुपमा प्रतियोगिताहरु संचालन गर्दै लैजाने र दशै तिहार पछि सबै खालका प्रतियोगिताहरु संचालन गरिने योजना सहित कार्ययोजना तयार भइरहेको छ । विश्वास छ पक्कै पनि दशै तिहार पछि हामी सबै खालका प्रतियोगिता संचालनमा ल्याउँछौँ ।
खेलकुदमा राज्यले पर्याप्त बजेट नछुट्याएको भन्ने गुनासो छ । के यो सत्य हो ?
खेलकुदको बजेट कार्यान्वयन पक्षबाट हर्ने हो भने मेरो बिचारमा बजेट राम्रै छुट्याएको जस्तो लाग्छ । तर, खेलाडीको लगाब र खेलाडीको मेहेनत हेर्ने हो भने खेलकुदमा अलि कम बजेट छुट्याएको जस्तो लाग्छ ।
खेल १६–४० बर्ष सम्मका उमेरका युवाहरुलाई मात्र खेल आवश्यक पर्ने हो कि ? त्यो भन्दा बढी उमेर समुहका मानिसहरुलाई पनि आवश्यक पर्छ ?
खेल क्षेत्रमा भबिष्य बनाउने भनेको उमेरको हिसाब भन्ने हो भने सानै उमेर देखि नै हो । बिशेष गरि १६ बर्षको उमेर देखी ४० बर्षको उमेरलाई मानिन्छ । तर, मनेरञ्जन र स्वास्थ्यको हिसाबले हेर्ने हो भने सबै उमेर समुहका मानिसलाई आवश्य पर्छ । मेरो बिचारमा ब्यवसायीक हिसावले १६ देखी ४० बर्षको उमेर सम्मका युवा खेलाडीहरु हाबी भएको देखिन्छ । मनेरञ्जन र स्वास्थ्य लगायत अन्य सबै उमेरका मानिसलाई खेलकुद अनिवार्य छ जस्तो लाग्छ ।
तपाई राजनीतिक छाता संगठनमा हुनु हुन्छ । तपाइसंग आबद्ध भएका युवाहरुलाई खेलकुदको मध्यमबाट कसरी ब्यवस्थापन गरिरहनु भएको छ ?
म कुनै पाटीको छाता संगठनमा आबद्ध छु । मकवानपुर खेलकुद बिकास समिति अध्यक्ष पद राजनीतिक दलको होइन । यसलाई मैले कुनै तबरबाट नहेरी स्वातन्त्र तरिकाले सबै पार्टीका युवाहरुलाई समेटेर काम गरेको छु र गर्दै जाने छु । म मकवानपुर खेलकुद बिकास समितीको अध्यक्ष पदमा रहदा कुनै किसीमको राजनीति गर्दा पनि गर्दीन र अरुलाई पनि गर्न दिन्न ।
नेपालको परिपेक्षमा हेर्ने हो भने खेलाडीले खेलले मात्र जिवन धान्ने अवस्था छैन । योे समस्याको समाधान कसरी गर्न सकिन्छ होला ?
यो बिषयमा त गम्भिर रुपले सोच्नु पर्ने सरकार पक्षले हो । मेरो बिचारमा खेलकुदको मध्यमले मात्र नभई अन्य क्षेत्रबाट पनि बढाउन सकिन्छ । बास्तबमा भन्ने हो भने खेल बिभिन्न खेलको आधारमा पनि भर पर्छ । खेल अनुसारको राज्यले बिशेष प्रबधान बनाएर गम्भिर ढंगले सोचेर काम गर्ने बेला आएको छ ।
नेपालमा हालसम्मकै ठूलो संख्यामा कोरोना संक्रमित थपिए
प्रहरी जवानको साउदको अन्त्येष्टि
खेल्ने क्रममा आफ्नै घरको छतबाट नाबालकको ज्यान गयो